Oovimba be-GBP-Funda ukuRhweba
I-GBP idiliza njengoko i-Euro Yenza ukuBuyiselwa kwakhona kwe-Shaky
I-GBP yehla ngexesha leseshoni yanamhlanje, iDola yaseNew Zealand nayo isemva kwezinye iimali zentengiso. I-Euro kunye ne-Swiss Franc, kwelinye icala, okwangoku zezona zimali zinamandla, zilandelwa yiDola kunye neYen. Nangona kunjalo, kufuneka kugxininiswe ukuba ukuphindaphinda kwe-Euro kuncinci, kwaye kungenzeka ukuba i-selloff iqalise kwakhona ngokukhawuleza okanye kamva ihlala ininzi.
I-Index ye-Manufacturing Purchasing Managers' Index inyuke ukusuka kwi-57.8 ukuya kwi-58.2 ngoNovemba, iphezulu kune-56.7 elindelekileyo. I-Index ye-PMI yoShishino lweNkonzo yehla ukusuka kwi-59.1 ukuya kwi-58.6, eyayingaphantsi kune-58.5 elindelekileyo. Isalathiso esihlanganisiweyo se-PMI sehla ukusuka kwi-57.8 ukuya kwi-57.7.
UJonathan Haskell, ilungu le IBhanki yaseNgilani IKomiti yoMgaqo-nkqubo weMali, yatsho kwintetho ukuba “Uninzi lotshintsho ekunyukeni kwamaxabiso lubangelwa zizinto zehlabathi ezifana nempahla ephuma kumazwe angaphandle kunye namaxabiso amandla.” Ulindele ukuba uninzi lweenguqu zibe "zexeshana".
"Idatha yamva nje iyaqhubeka nokubonisa ukuba imakethi yezabasebenzi iqinile, ibeka uxinzelelo oluphezulu kwimivuzo, utshilo. Ngokombono wemigangatho yokuphila, oku ngokuqinisekileyo ziindaba ezilungileyo, kodwa kwimbono yokunyuka kwamaxabiso, oku kufuneka kuhambelane nokunyuka kwemveliso, ngoko kufuneka sihlale siphaphile.
Ukunyuka okulindelweyo kumazinga enzala yebhanki ukusuka kumanqanaba kaxakeka-xa kusenzeka-akuyompazamo, kodwa luphawu, wongezelela. “Oku kubonisa impumelelo yomgaqo-nkqubo, ikakhulu ukuxhasa imali kunye nempilo yezoqoqosho ngexesha lobhubhani. kunye nomgaqo-nkqubo wesayensi. "
I-GBP Yehle yaya kuMtsha ka-2021 ePhantsi ilandela amandla eDola yaseMelika eBanzi
I-GBP ithengisa kwi-1.3370 ngexesha lokushicilela, nje phantsi kweepesenti ze-0.19 ngexesha leseshoni yaseNew York. Umoya kwimarike udakumbile, i-indices zase-US ziyehla. Ngaphezu koko, i-CBOE Volatility Index (VIX) ikhuphuka malunga ne-7%, ibangela ukuthengiswa kweemarike njengoko abatyali-mali bebalekela kwiimpahla ezikhuselekileyo, ezixhamla idola laseMelika. Ngaphaya koko, iimali ezinobungozi ezifana ne-GBP, i-AUD, kunye ne-NZD zandisa ilahleko yazo iveki yonke.
Kwi-macroeconomic front, i-IHS Markit PMIs kaNovemba yakhululwa yi-docket yezoqoqosho yase-US. I-PMI yoMveliso inyuke yaya kwi-59.1, idlula ulindelo lwe-59. I-Index yeNkonzo yanda yaya kwi-57 kodwa yawa phantsi kwe-59.1 eqikelelweyo. Ukongeza, i-Richmond Fed Manufacturing Index inyuke yaya kwi-11 ngoNovemba, ngaphezu kwezintlanu ezicetywayo.
Iinzuzo ze-GBP kwiDatha yoMsebenzi oZinzileyo, njengoko i-USD ihlala iZinzile kwiiNtengiso zokuThengisa
I-GBP inyuke ngokukhawuleza namhlanje, incediswa yidatha eqinile yomsebenzi eye yanciphisa inkxalabo malunga nefuthe lokuphela kwesicwangciso se-furlough. I-USD nayo yomelele, ngenxa yokuthengisa okuphezulu kunokulindelekileyo. I-euro izama ukubuyisela enye ilahleko yayo, kodwa ihlala ibuthathaka ngenxa yeembono ze-ECB ezimbi. Iimali zeemveliso, kwelinye icala, ziyancipha ngenxa yemibono edibeneyo yomngcipheko.
Kwangoko namhlanje, iunited Kingdom ikhuphe idatha yemarike yezemisebenzi elungileyo. Ngenxa yokunyuka okukhulu kunokulindelekile kwe-247k yengqesho, izinga lokungasebenzi kwiinyanga ezintathu eziphela ngoSeptemba lahla isibini seshumi seepesenti ukusuka kwinyanga edlulileyo ukuya kwi-4.3 ekhulwini, xa kuthelekiswa nokuqikelelwa kwe-4.4 ekhulwini. Ngo-Oktobha, amabango okungasebenzi awela nge-14.9 lamawaka, xa kuthelekiswa nokuhla okuhlaziyiweyo kwe-85.9 lamawaka ngoSeptemba.
Uphuculo lwenzekile emva kokuba inkqubo karhulumente yokukhutshwa kwemisebenzi igqityiwe ngoSeptemba, oko kuthetha ukuba uninzi lwabantu abasi-1.1 sesigidi abebekule nkqubo bakwazile ukufumana umsebenzi emva kokuba iphelile.
Namhlanje kugxilwe kwiintengiso zentengiso eMelika. Inani lenyuka ngeepesenti ze-1.7 ngenyanga ngenyanga ka-Oktobha, xa kuthelekiswa neepesenti ze-0.8 kwinyanga edlulileyo, ukunyusa i-greenback. Abathengi kulindeleke ukuba baqale ukuthenga iiholide zabo ekuqaleni kwalo nyaka, ngaphandle kweenkxalabo zokubonelela kunye nokulibaziseka kokuhanjiswa.
USekela Mongameli uJoe Biden ukhethe umtyunjwa wakhe kuSihlalo weFederal Reserve. Nangona uBrainard enazo iziqinisekiso ezinamandla, uPowell ngoyena mgqatswa ufanelekileyo. Ukusukela ekuqaleni kwakhe kakubi, ukusebenza kwakhe kuphucuke kakhulu, kwaye iimarike zibeke ithemba labo kuye.
I-GBP igcina iiNgeniso eziSekwe kwiDatha yeMisebenzi yase-UK
I-GBP yandisiwe kwiveki edlulileyo yokubuyisela ukuhamba ukusuka kwi-lows yenyanga enye, ukufumana i-traction ngosuku lwesithathu ngokulandelelana njengoko imfuno ye-GBP yanda ngokukhawuleza. IBhanki yaseNgilani (BOE) uRhuluneli u-Andrew Bailey's amagqabantshintshi e-hawkish ngobusuku bathathwa njengento ebalulekileyo esebenza njenge-tailwind ye-GBP.
U-Bailey utshele iKomidi ye-Nondyebo eKhethekileyo yePalamente yase-UK ukuba wayenenkxalabo malunga ne-inflation forecast kunye nokuba zonke iintlanganiso zomgaqo-nkqubo ezizayo ngoku zisetafileni yokunyuka kwezinga. Emva kokuba ingxelo yemisebenzi yase-UK yakutshanje ibonise ukuba izinga lokungasebenzi liye lawela ngaphezu kokulindelwe, ukuya kwi-4.3 ekhulwini ngoSeptemba ukusuka kwi-4.5 ekhulwini ngo-Agasti, inzala yokuthenga intraday yanda.
Inani labasebenzi abahlawulwayo lenyuke nge-160,000 ngoSeptemba nango-Okthobha, nto leyo ebonisa ukuba ukupheliswa kwenkqubo karhulumente yokuphelisa umsebenzi akuyonakalisi imarike yemisebenzi. Izibalo ziqinise ityala leBhanki yaseNgilani ukunyusa izinga lenzala ngamanqaku esiseko se-15 ngoDisemba, eyayithathwa njengento ebalulekileyo ekusebenzeni okulungileyo kwe-GBP.
tags IGBP, iUSD
I-BoE Iyanqanda ukuPhakamisa amaRhafu eNzala, i-Franc ihlala yomelele
Iponti yehla kakhulu emva kokuba i-BoE igqibe ekubeni inganyusi inzala, iphoxa abaninzi ababelindele ukonyuswa. I-euro okwangoku yimali yesibini ebuthathaka yosuku. I-yen kunye ne-Swiss franc, kwelinye icala, zinyuka ngokukhawuleza, zincediswa kukwehla kwezivuno ze-benchmark eJamani nase-United Kingdom. Idola yomelele njengoko abatyalizimali bahlala belumkile ngaphambi kwengomso Intlawulo engekho kwifama ingxelo.
Ngevoti ye-7-2 namhlanje, i-BoE igcine i-Bank Rate kwi-0.10 ekhulwini. UDave Ramsden noMichael Saunders, ookhetshe ababini abaziwayo, bavotele ukwanda kwe-0.25 ekhulwini. I-MPC iphinde yavuma i-6-3 ukuba iqhubeke nokuthenga i-GBP 875 yeebhiliyoni kwiibhondi zikarhulumente. UCatherine Mann, uDave Ramsden, kunye noMichael Saunders bavotele i-GBP ye-20 yeebhiliyoni ezihlayo ekuthengeni ibhondi.
Kwisikhokelo sayo sangaphambili, i-BoE ichaze ukuba ukuba idatha engenayo, ngakumbi kwimarike yezemisebenzi, iyahambelana noqikelelo olusembindini kwiNgxelo yoMgaqo-nkqubo weMali, kuya kuba “yimfuneko ukuba kunyuswe iRhafu yeBhanki kwiinyanga ezizayo ukubuyisela i-CPI ngokuzinzileyo kwi-inflation. I-2% ekujoliswe kuyo. "
Amabango okuqala okungabikho kwemisebenzi e-United States awela ngo-14k ukuya kwi-269k ngeveki ephela ngo-Oktobha 30, ebetha ukulindela kwe-277k. Iphantsi kakhulu ukususela nge-14 ka-Matshi 2020. Amabango okuqala ehla -15k ukuya kwi-285k kumyinge weeveki ezine ezihambayo, ophantsi kakhulu ukususela ngo-Matshi 14, 2020. Kwiveki ephela nge-23 ka-Oktobha, amabango aqhubekayo ehla -134k ukuya kwi-2105k, ephantsi kakhulu inqanaba ukusukela nge-14 kaMatshi 2020. Umyinge weeveki ezine ezihambayo zamabango aqhubekayo wehle nge-156 lamawaka ukuya kwi-2357 lamawaka, elona nqanaba lisezantsi ukusukela ngoMatshi 21, 2020.
Ukusilela kwezorhwebo kwe-US kwanda kwi-USD -80.9 yezigidigidi ngoSeptemba, xa kuthelekiswa nokulindela kwe-USD -74.5 billion. Kwikota yesithathu, imveliso engeyiyo yeefama yehle nge-5.0 ekhulwini, xa kuthelekiswa noqikelelo lwe-1.5 ekhulwini. Iindleko zabasebenzi zinyuke nge-8.3%, xa kuthelekiswa noqikelelo lwepesenti ezi-5.2. NgoSeptemba, intshiyekela yorhwebo yaseKhanada ibiyi-CAD 1.9 yebhiliyoni, ingaphantsi kakhulu koqikelelo lwe-CAD 2.3 yeebhiliyoni.
Irhuluneli yeBhanki yaseJapan uHaruhiko Kuroda udibene noNdunankulu omtsha waseJapan uFumio Kishida namhlanje ukuxoxa ngeJapan, uqoqosho lwehlabathi, kunye neemarike zemali, ngokwengxelo. UKuroda uthe uxoxe ngeqhinga leBhanki yaseJapan kwi-Kishida kwaye waphinda wachaza injongo yokuphumeza i-2% yokunyuka kwamaxabiso. Xa ebuzwa malunga ne-Fed's tapering, wachaza ukuba iBhanki yaseJapan ikwimeko ekhethekileyo xa kuthelekiswa neebhanki zasentshona. UKuroda ukwathe ukuba ulawulo lwegophe lwesivuno luya kugcinwa nasemva kokuba ubhubhane sele uqukunjelwe.
tags IBhanki yaseNgilani (BoE), IGBP
I-CHF iyenyuka iNxamnye ne-GBP kunye ne-Euro, njengoko iDola ihleli iguquguquka
Namhlanje, i-CHF iphakama ngokuphawulekayo, nangona ugxininiso lokuthengisa luye lwajika ukusuka kwi-Euro ukuya kwi-GBP. Nangona kunjalo, i-CHF igqitywe yi-NZD, eyona nto inamandla kakhulu. IYen, kwelinye icala, ibuthathaka ngenxa yemvakalelo eyandisiweyo yomngcipheko ukusuka eJapan ukuya eYurophu. Imali yesibini-ebuthathaka yi-pound sterling. Idola idityaniswe nedola yaseCanada.
Ngo-Oktobha, i-UK PMI Manufacturing yagqitywa kwi-57.8, ukusuka kwi-57.1 ngoSeptemba. Nangona kunjalo, oku kukwanda kokuqala kwiinyanga ezintlanu. Ngaphandle kokudityaniswa komsebenzi omtsha wokuthumela ngaphandle, ukukhula komyalelo omtsha kuye kwanyukela phezulu, ngokwemarike. Nangona kunjalo, amaxabiso okuthengisa anyuke ngexabiso elingazange libonwe ngaphambili.
“Uthungelwano lonikezelo lwehlabathi olucinezelekileyo luphazamisa izicwangciso zemveliso, ngelixa ukunqongophala kwabasebenzi kunye nokuncipha kokuthathwa komsebenzi omtsha wokuthumela impahla kwamanye amazwe nako kuthintela ukukhula,” utshilo uRob Dobson, uMlawuli kwi-IHS Markit. Lo mmandla uphantsi wokukhula ukhatshwa kukunyuka okuthe kratya koxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso, abavelisi benika ingxelo yokonyuka kwengxelo ekufutshane neendleko zegalelo kwakunye nokunyuka kwerekhodi kumaxabiso athengiswayo.”
Emva komsebenzi othile ongaqhelekanga kule veki, i-Fed iya kubhengeza i-tapering kule veki, i Ibhanki yaseNgilani inokunyusa amaxabiso, kwaye i-RBA inokubonelela ngombono ongeyonyani kwimbonakalo. Sisiqalo nje eso, nezinye iibhanki ezingoovimba zilandela lo mgaqo kwaye zilungiselela ukwenza nangakumbi kulo nyaka uzayo njengoko ukunyuka kwamaxabiso kusoloko kuphezulu ngendlela engathandekiyo.
I-GBP, i-CHF encinci phakathi kokunyuka kwe-UK / France "Umqolo wokuloba"
Ubuthuntu apho i-GBP / i-USD ithengisa khona ngoku - isibini asibonisi umnqweno omkhulu wokucela umngeni kwi-avareji ye-21 yeentsuku ezihambayo kwi-1.3694, i-psychological 1.3700 level, okanye ukuchasana ngendlela ye-18 kunye ne-27 Oktobha iyancipha malunga ne-1.3710 - ingaba yimbonakaliso yokukhathazeka malunga ne-UK / France kunye nobudlelwane be-EU.
Ewe, "uluhlu lokuloba" olukhula ngokukhawuleza phakathi kwe-UK neFransi lubonakala lungenasiphelo, kunye nosoyikiso lokugqibela lokumisela izithintelo zorhwebo ezinqamlezileyo kunye nezithintelo ezitsha kwiinqanawa zokuloba zase-UK kumanzi aseFransi ukuba i-UK ayinikeli ngaphezulu. iilayisensi kushishino lokuloba lwaseFransi.
Ngosuku lokuqala lweveki entsha, i-USDCHF ifumene unikezelo olutsha kwaye ngoku iguqule inxalenye enkulu ye-Friday yokubuya kwi-0.9100 uphawu okanye iinyanga ezimbini ezisezantsi. Ukulandela i-advanced advance ukuya kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-13 ka-Okthobha, idola yaseMelika ifumene ukuhla okuncinci kwe-intraday. Ngenxa yoko, isibini se-USDCHF sangena phantsi koxinzelelo oluthile, nangona izinto ezininzi zinokunceda ukunciphisa nayiphi na ilahleko.
tags CHF, Euro, IGBP
Ukunyuka kwe-GBP njengeYen Falls, iDola iyashukumisa ukuThengisa
Ukuhlaziywa: 16 October 2021
Namhlanje, i-GBP ithatha umboniso, ityumza ngokwamanqanaba aphikisayo ngokuchasene neJapan Yen kunye nexesha eliphantsi elisondele kwi-Euro. Kwintengiso eqinileyo yokuthengisa, idola izama ukomeleza ngokuchasene ne-Euro ne-Swiss Franc, kodwa intshukumo iyonqena kwenye indawo. I-selloff kwi-yen ayitshintshanga, kodwa ikhawulezile. I-Aussie ne-Kiwi babambe imihlaba yabo kwaye basendleleni yokuyigqiba iveki njengabona baphumeleleyo.
The index dollar ujinga malunga ne-94.00 namhlanje emva kweentsuku ezimbini zelahleko; Nangona kunjalo, ngenxa yenen yaseJapan ebuthathaka, idola / yen iqhubele phambili ngokukhawuleza ukuya kwiminyaka emithathu ephezulu ephezulu malunga ne-114.20. Intengiso e-United States inyuke ngokumangalisayo nge-0.7 yepesenti ngoSeptemba, xa kuthelekiswa neepesenti ezihlaziyiweyo ze-0.9 kwinyanga ephelileyo. I-Bhanki yaseJapan yokuma okungaginyisi mathe nokwanda kweminyaka emi-2 ye-US-Japan umahluko kumanqanaba ahlala engumbono obalulekileyo. Ukulandela iingxelo ezilungileyo zengeniso, ikamva laseMelika liqikelela olunye usuku lwentengiso.
Njengoko izama ukufumana ukubambeka ngaphezulu kwe- $ 1.1600, imali enye iye yahlala inzima. I-GBP iyaqhubeka nokugqwesa njengoko umhla wokunyusa i-BoE usondela, kwaye ikhefu elicocekileyo elingaphezulu kwe- $ 1.3750 liseta umceli mngeni we-200-day elula yokuhamba (i-SMA) kwi- $ 1.3545. Kufuphi ne-157.30, iponti / yen idlala ngothando ngeenyanga ezingama-44. Idola yaseMelika inokuthi ibe nokulungiswa ngaphakathi kwexesha elide, ngenxa yokuzimisela kweFed ukuqala ukucofa kungekudala.
Idatha yokunyuka kwamaxabiso yabathengi ngoSeptemba yayixhalabisa. Nangona amanani e-PPI ebengaphantsi kunoko bekuqikelelwe, oku akubonisi ukuba ukunyuka kwamaxabiso akusengxaki. I-Fed okwangoku ayothuki njengeBhanki yaseNgilani, kodwa iyaqhubeka ngokuthe chu ekupheliseni indawo yokuhlala ngethemba lokufumana ukuphakanyiswa kwenqanaba lokugqibela kwisiqingatha sesibini sonyaka ka-2022. UBullard noWilliams bazakubonakala esidlangalaleni namhlanje ukuxoxa ngeendlela ezahlukeneyo. izihloko.
Ukunyuka kwe-GBP kuyakhawulezisa, ukubeka uxinzelelo kwiDola yaseMelika
Iponti yaseBritane inyuke ngaphezulu kwe-1.3750 ngolwesiHlanu, ifikelela kwi-1.3775 okokuqala ukusukela phakathi ku-Septemba. Esi sibini sizuze malunga ne-0.65% kweyona ntsebenzo yemihla ngemihla kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, kwaye kulindeleke ukuba iphele iveki ngenzuzo enkulu emva kokufumana malunga neepesenti ezi-2.5 ngo-Okthobha.
I-GBP inyukile kwiveki yesibini ilandelelana, inyuswe ngumnqweno omkhulu wokufumana umngcipheko, owenzakalisa idola ekhuselekileyo. Izalathiso eziphambili zesitokhwe ziyayigqiba iveki ngenqaku eliphezulu, ziqiniswe yimivuzo yekota ebhetele kunale ibilindelwe kwicandelo lezemali, eliye lathomalalisa inkxalabo malunga nokunyuka kwamaxabiso kunye nokuphazamiseka kwempahla.
Ukubuya kwe-GBP, iBhanki yaseNgilani ithembele kancinci ekuqiniseni
Kwintlanganiso yayo kaSeptemba, iBhanki yaseNgilandi ivote i-9-0 ukugcina ireyithi yeBhanki kwiipesenti ezi-0.1. Amalungu avumile i-7-2 ukugcina inkqubo ye-QE kwinqanaba layo langoku le-895 yezigidigidi zeepawundi. Amalungu angaphandle uMichael Saunders kunye no-Sekela-Rhuluneli u-Dave Ramsden bakhuthaze ukwehla kwexabiso lokuthengwa kwempahla kwi-840 yezigidigidi zeepawundi. Ngenxa yokunyuka kwamaxabiso ombane, abenzi bomgaqo-nkqubo balumkisile ukuba ukunyuka kwamaxabiso kunokunyuka ngaphezulu kwe-4% ngokuphela konyaka.
Ngokuphathelele kuphuhliso lwezoqoqosho, ibhanki engumbindi iphakamise imeko yokunyuka kwamaxabiso kodwa yehlisa uqikelelo lwalo nyaka. Ngenxa yokuba ukunyuka kwamaxabiso kuye kwaqhubeka ngakumbi kunokuba bekuqikelelwe, ibhanki esembindini ilumkisile ukuba ingafikelela kwi-4% y / y ngokuphela konyaka, ngenxa yokutshatyalaliswa kwexabiso lamandla. Ukonyuka okuthe gabalala kwendawo kunye namaxabiso egesi ezizayo xa kuthe kwavela ingxelo ka-Agasti "Umngcipheko ophezulu kwi-MPC uqikelelo lwamaxabiso ukusukela ngo-Epreli 2022, kwaye yatsho ukuba ukunyuka kwamaxabiso kwi-CPI kunokuhlala ngaphezulu kwe-4% ukuya kwi-2Q22, yonke into ilingana," ngokwemizuzu.
Ukusukela kwintlanganiso yokugqibela, i Uqoqosho lwase-UK ibonakalise iimpawu zokwehlisa. Kwintlanganiso, iBhanki yaseNgilani yehlisa uqikelelo lweGDP yokukhula kwayo, icacisa imiba yokuhanjiswa kweenkonzo njengesizathu sokuncipha. Kwi-3Q21, ukukhula kwe-GDP kulindeleke ukuba kube yi-+2.1 yeepesenti, ezantsi kuqikelelo lwangaphambili lweepesenti ezi -2.9 kunye nama-+ 2.5 epesenti ngaphantsi kwenqanaba lobhubhane.
Ngelixa ibhanki ephambili ingakhange ilungelelanise naziphi na izixhobo zomgaqo-nkqubo wezemali, ithumele umyalezo omncinci ngakumbi we-hawkish. Ukuqala, amalungu amabini, endaweni yelinye, akhethe ukunciphisa ubungakanani bokuthengwa kweeasethi. Okwesibini, amagosa akuvumile oko "Ezinye izinto ezenzekayo ngeli xesha lokungenelela zibonakala ziqinisa loo ngxoxo [yokuqinisa], nangona ukungaqiniseki kukhulu kusahleli," ngokwengxelo. Ukulandela iindaba, i-GBPUSD yabuya yaya kwiintsuku ezintathu eziphakamileyo ze-1.3711, ebonisa ukuba intengiso iyitolika njengophawu lwe-hawkish.
Ukubuyela kwe-GBP kwiBhanki yaseNgilani kwi-Hawkish Surprise
I-Sterling ichache kakhulu emva kokuba amalungu amabini e-BoE MPC evotile. Iziganeko zamva nje ziye zaqinisa imeko yokuqiniswa kancinci. Iimali zezinto zorhwebo ziye zaqina ngenxa yokufumana kwakhona okuncinci kwistokhwe.
I-Yen, i-Swiss Franc, kunye neDola, kwelinye icala, buthathaka njengoko imeko yomngcipheko iphuculwe. Nangona kunjalo, iponti iyaqhubeka nokuba yeyona mali iqhuba kakubi kule veki, ngelixa i-Swiss Franc ihlala ingamandla.
Ukuphuka kwe-GBP / USD yesithintelo esincinci kwi-1.3691 kubonisa ukuba ukwehla ukusuka kwi-1.3912 kugqityiwe, kwaye ukonyuka okukhulu kunokulindeleka ukuba uphinde ulibeke eli nqanaba. Kwangokunjalo, ikhefu le-150.80 yokuchasana okuncinci kwi-GBP / JPY iqikelela kwangaphambili ukuya ku-152.82 ukuxhathisa. Umbuzo ophambili uya kuba kukuba i-EUR / GBP inokugqobhoza i-0.8499 kwaye ivavanye inqanaba le-0.8448. Ngokubanzi, iSterling ibonakala ngathi ilungisiwe.
Imbonakalo ye-GBP ihlala ngokuBleak emva koSelloff phakathi koLindelo lweFED
Ekuboneni kokuqala, iintloko eziphambili kule veki IBhanki yaseNgilani (BoE) intlanganiso ibonakala inika imiqondiso exubileyo kwi-GBP. Njengoko intengiso ihlengahlengisa kwinto yokuba amandla e-MPC okunika ithoni ethembekileyo iyancipha. I-GBP iyancipha ukusuka kwi-1.3692 yangaphakathi ukugcina ukuhla kokulungiswa kwenyanga ephantsi phambi kweMelika evulekileyo ngoLwesibini. Njengokuba idola yaseMelika isiba buthathaka kwimodi yentengiso ethobekileyo, ikhephu lokubhabha ngoku libonisa usuku lokuqala oluqinisekileyo kwisine.
Imeko yomngcipheko ijongeka ngathi ikhutshiwe. Ukwehla okumangalisayo kweNikkei yayikukubanjwa nje emva kweholide. I-yen kunye ne-franc yaseSwitzerland bafumene ezinye zeelahleko zabo, kodwa bahlala bezona mali zinamandla kwiveki. I-Sterling iye yaqhuba kakubi kuzo zonke iimali eziphambili ngoku, zibi kakhulu kuneemali zorhwebo. Iponti iyasindwa kukuthengiswa kweminqamlezo yaseYurophu. Ngokubanzi, iimarike zinokulumka namhlanje, njengoko intlanganiso ye-FOMC ngoLwesithathu ibeka umngcipheko omkhulu.
Ukunyanzelwa kwehlabathi ukuba kube namandla azinzileyo, ekhokelwa ikakhulu yi-Nkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson, iqiniswa kukonyulwa kuka-Mongameli wase-US u-Joe Biden kubambiswano lwe-United Nations (UN). Kwangolo hlobo lunye, bekukho iingxoxo malunga nokwandiswa kwetyala lokuhlawulwa kwetyala lase-US kunye neenkcukacha zakutshanje zezindlu zase-US, ezibangela ukuthandabuza kukoyikeka kweFed.
Kwelinye icala, iingxelo ezivela kuNobhala wezoShishino wase-UK, Kwasi Kwarteng, oluchithile uloyiko malunga nokunqongophala kwamandla, anokunceda. Ngapha koko, amazwi e-Nkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson kukuba ubudlelwane be-UK-France bubunjalo "ayinakutshatyalaliswa" thanda isibini semali ukuba sithathe amabhidi.
I-GBP inokuphulukana nesantya sayo ngaphandle kwethoni ye-Hawkish BoE
I-GBPUSD icelwa umngeni kwicala elisezantsi elinenyanga ezimbini ubudala lokunyuka kwenkxaso kufutshane ne-1.3640, ngaphambi kwenyanga ka-Agasti ephantsi ye-1.3602. Ukunyanzela abathengi, inkqubela phambili yokufumana kwakhona kufuneka iwele ezantsi ngoSeptemba 2009 ezantsi nge-1.3730.
Abatyalomali baya kuthi bajonge ingxelo yokugqibela yeBhanki yaseNgilane, ecwangciselwe uLwesine. Umlenze olandelayo we-GBP / USD yomlenze olandelayo wokuhamba usiya kugqitywa yiminyhadala ebalulekileyo yebhanki. Naziphi na iinzuzo zokuqala ze-GBP emva kwentlanganiso ye-BoE zinokuphuma ngaphandle kokuba kukho ubungqina obucacileyo be-MPC obusebenzisa ithoni ye-hawkish.
Abarhwebi be-GBPUSD banokuba nethemba ngaphambi kotyelelo lwe-Nkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson e-US, xa kuthathelwa ingqalelo imarike yovuyo kunye nokwehla kwedola yaseMelika kutshanje. Uloyiko malunga nokucinezelwa kweFed, ukusabela kwe China kwimicimbi ye-Evergrande, kunye neengxaki zecovid, kwelinye icala, kunokuba ngumceli mngeni kubathengi ababini.
Ukuwa kwe-GBP kuThengiso lweeNtengiso, i-CHF kunye ne-Yen ejongene noXinzelelo lokuthengisa
Ihlazo Intengiso yase-UK Ingxelo isilele ukuxhasa i-GBP. Ukuza kuthi ga ngoku, iimarike zanamhlanje bezizolile. Njengokuba uluvo lweemarike lubonakala ngathi luzolile, i-yen iyaqhubeka nokuguqula izibonelelo zale veki. Emva kokudanisa ukuthengisa amanani, idola ithamba kwaye iponti iyancipha kancinci.
Ukuthengiswa kweentengiso zase-UK kwehle -0.9% umama ngo-Agasti, ngaphantsi kokulindelweyo ngo-0.5% wokukhula komama. Intengiso iyonke kwiinyanga ezintathu ukuya ku-Agasti ibisonyuke nge-0.0% kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Oku kukwa-12% ngaphezulu kwenqanaba laphambi kobhubhane ngoFebruwari 2.6. Ukuthengisa okungasebenzisi mafutha kwehlile -0.3% MoM, nayo ingaphantsi kokulindelwe ukukhula kwe-4.6% MoM. uqikelelo 2020% y / y.
Ukulandela ukunyuka kwezivuno eziphambili zehlabathi, u-Swiss Franc kunye ne-Yen bobabini baphantsi koxinzelelo lokuthengisa namhlanje. Ukuthengisa okubuthathaka kubuthathaka kwi-GBP, kwaye i-Euro ayisekho mva. Idola ixutywe, kunye nezezimali zaseCanada naseAustralia zezona zinamandla. Ngexesha leseshoni yase-US, ikhalenda yezoqoqosho ibikhaphukhaphu, kwaye ukukhula kweemarike zomngcipheko kuyatyhala kwiimarike ze-FX ukuya ngasekupheleni kweveki.
Isalathiso sexabiso somthengi se-Eurozone simi kwi-3.0% y / y ngo-Agasti, xa kuthelekiswa ne-2.2% y / y ngoJulayi. Amandla (+ 1.44%) abenegalelo kwezona zinto zixhomekeke kukunyuka kwamaxabiso ngonyaka kwindawo ye-euro, kulandele izinto ezingezizo ezamandla ezenziweyo (+ 0.65%) kunye nokutya, utywala necuba, kunye neenkonzo (+ 0.43%).
I-EU CPI igqityiwe nge-3.2% y / y, xa kuthelekiswa ne-2.5% y / y ngoJulayi. Amaxabiso asezantsi asezantsi abhaliswe eMalta (0.4%), eGrisi (1.2%) nasePortugal (1.3%). Amaxabiso aphezulu ngonyaka abhalwa e-Estonia, eLithuania nasePoland (yonke i-5.0%). Xa kuthelekiswa noJulayi, ukunyuka kwamaxabiso ngonyaka kuye kwahlala kuzinzile kwilizwe elinye kwaye kwenyuka kumazwe angama-26.
I-GBP ifikelela kwiVeki eNtsha yeVeki ye-1.3735
I-GBPUSD iwela kumanqanaba amatsha evekini kwiseshoni yaseMelika, ithengisa nge-1.3735, yehla nge-0.29 yepesenti ngexesha lokubhalwa. Njengokuba sisondela kwimpelaveki, sinokubona uxinzelelo olubi ngenxa yeemarike ezingathandekiyo.
Imeko yentengiso imasikizi. Njengokuba abatyali zimali beya besiba bhetele ekuvuseleleni uqoqosho lwehlabathi ngenxa yenkxalabo malunga noxinzelelo lweDelta kunye neChina, izitokhwe zaseMelika zilahlekelwa ngumhlaba, kwaye isivuno sebond siyenyuka, sibonisa imeko yaseYurophu.
Ngaphandle kokwehla kweSentiment yabathengi, ingxelo yeNtengiso yase-UK ehlwempuzekileyo iyasilela ukunceda iponti yaseBritane, njengoko i-greenback yomelela. I-Federal Open Market Committee (i-FOMC) iya kudibana ngo-Septemba 21-22 ukuxoxa ngomgaqo-nkqubo wezemali, olandelwa yiBhanki yaseNgilani ngoSeptemba 23.
tags CHF, IGBP, yen